नयाँ कैलेडोनिया: गएर लायक छन् कि3paradises
नयाँ कैलेडोनिया को द्वीप प्रशान्त महासागर को बीचमा अवस्थित छ। यसलाई साधारण बगैंचाहरु, सुनको तटों, कोरल reefs र धनी समुद्री जीवन को लागि प्रसिद्ध छ। त्यसैले, यो धेरै अक्सर स्वर्गीय उद्यानलाई तुलना गरिएको छ। नयाँ कैलेडोनिया - Melanesian संस्कृति, फ्रान्सेली प्रभाव र सुन्दर प्रकृति को एक अद्भुत संयोजन छ। कुनै पनि पर्यटक को ध्यान लायकका छन् कि ठाउँमा विचार गर्नुहोस्।
नोउमिया नयाँ कैलेडोनिया को द्वीप को मुख्य आकर्षण हो। पर्यटन अक्सर यसलाई यहाँ नेतृत्व। यो राजधानी नोउमिया रूपमा, अचम्मको छैन। त्यहाँ एक विश्व-प्रसिद्ध सांस्कृतिक केन्द्र Tjibaou, एक विशाल संग्रह भेला जो को सांस्कृतिक मान ओशिनिया को मानिसहरूका।
यो पनि नयाँ कैलेडोनिया को द्वीप ज्ञात छ वास्तु स्मारक को राजधानी छ। त्यसैले लायक एक यात्रा Bernheim पुस्तकालय। त्यो स्तम्भहरू को ठूलो संख्यामा प्रसिद्ध धन्यवाद भयो। हामी सेन्ट जोसेफ को पुरानो गिर्जाघर बेवास्ता गर्न सक्दैनन्। ओशिनिया को पुरातत्व र ethnology देखि, प्रादेशिक जियोलोजिकल र ऐतिहासिक संग्रहालय परिचय। र स्थानीय चिडियाघर मा, तपाईं अद्वितीय देख्न सक्नुहुन्छ flightless चरा Kaga। कुनै कम नोउमिया मछलीघर, चमकीले मुगा माछा र एक ठूलो संख्या जहाँ दिइएको प्रहार cephalopods।
धेरै रोचक ठाँउहरु नयाँ कैलेडोनिया को राजधानी को वरपर मा अवस्थित छ। को Pantheon कनक आदिवासी नेताहरूको सीट - त्यसैले, यहाँ Fatanaue caverns निषेधित छन्। यो पत्थर को खम्बा Le बोन र गुफा पेरिन हेर्न लायक पनि छ। महानताका र सौन्दर्य स्ट्राइकिङ् छन् झरने Uadiana र Madeleine। स्थानीय सुविधाहरू वाइन, वाइनरी Amyu पास र परिचय देखि मृग खेत Ruz।
नोउमिया स्थित छ सानो शहर Bourail देखि 150 किमी। त्यहाँ धेरै शिकार मैदान र समुद्र माछा मार्ने लागि राम्रो अवस्था हो। साथै, Burao रोचक ऐतिहासिक स्थलहरुको छ। विशेष मा, न्यूजील्याण्ड युद्ध चिहान र ऐतिहासिक अरब चिहान।
ब्राउन को वरपर मा बनाउन नयाँ कैलेडोनिया सबै दुनिया भर प्रसिद्ध भए प्राकृतिक आकर्षण प्रबन्ध मिलाए। यो "कछुवा समुद्र तट" बहिआ बे ला रशे को लोकतान्त्रिक Tortyus र चट्टानी massif बुझाउँछ। भने बीच sails सालाना हजार बारेमा कछुवा। यहाँ तिनीहरूले अन्डा राख्नु। कारण कछुवा को लोकप्रियता गर्न समुद्र तट र डी रय आउँछन्।
यो स्थान अक्सर भनिन्छ संसारमा सबैभन्दा सुन्दर द्वीप। साथै, पेन द्वीप सबैभन्दा महंगा रिसोर्ट्स को छ। honeymooners बीचमा विशेष गरी लोकप्रिय उहाँले जित्यो।
त्यहाँ पानी गुफाहरु र सेतो तटों को धेरै छन्। यो एक विशेष स्वाद द्वीप पाइन thickets दिन्छ। पेन को टापुमा vacationing गभर्नर को निवास र पुरानो जेल को भग्नावशेष भ्रमण गर्न समय छुट्याइएको गर्नुपर्छ गर्दा। नयाँ कैलेडोनिया यसको शानदार दृश्यहरु लागि प्रसिद्ध छ। तिनीहरूलाई को एक केप Nga को शीर्ष गर्न चढाई गरेर प्रशंसा गर्न सकिन्छ। थप र नयाँ अनुभव गुफाको Grotte डे Uimbni र Grotte d`Uachia मा धमकना हुनेछ। विशेष उल्लेखनीय enigmatic निर्माण, खुला एल Chevalier छन्। वैज्ञानिकहरू अनुसार, आफ्नो उमेर 12 हजार पुग्छ। साल। यो के उद्देश्य यी सुविधाहरु निर्माण थिए अज्ञात अझै पनि छ। यो स्थान भ्रमण पछि, तपाईं एक वास्तविक अन्वेषक जस्तै लाग्छ।
ग्रह मा सबै भन्दा सुन्दर ठाउँ। रूस मा सबै भन्दा सुन्दर ठाउँ
प्रेम को भेनिस शहर
धरती मा सबैभन्दा सुरक्षित ठाउँ
बुद्ध मूर्ति - आफ्नो आकर्षण के?
बोस्टन कहाँ छ? के आकर्षक छ
टाइल कसरी कटौती गर्न: आधारभूत नियमहरू र एक सानो काटन रहस्य
पोलिस मा हिउँदमा खीरे। नुस्खा र कुकिङ सुझाव
कस्तो आहार अल्सर 12 ग्रहणी अल्सर characterizes?
संलग्नहरू बिना गाउँमा व्यापार कस्तो खोल्न?
मार्च 8 मा शिल्प, सँगै छोराछोरीलाई आफ्नो हातमा। प्रियजनहरूलाई व्यवहार - मार्च 8 मा शिल्प बनाउन!
मानविय मनोविज्ञान र एक स्वस्थ व्यक्तित्व आकार दिन यसको भूमिका
Bangs बिना quads संग brunettes (फोटो)
जाडोमा विवाह - विचारहरू। जाडोमा एक विवाह धारण गर्ने सल्लाह र विप